चर्चित व्यवसायी बलराम महतो राजनीतिमा आउँदै, कुन पार्टीमा जालान् ? (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
चर्चित व्यवसायी बलराम महतो राजनीतिमा आउँदै, कुन पार्टीमा जालान् ? (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 2022 March 16, 12:44 pm
काठमाडौं, २ चैत्र । चर्चित निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले आफू राजनीतिमा आउनसक्ने खुलासा गरेका छन् । अहिले उनको नेतृत्वमा रहेको रमण कन्स्ट्रक्शन छोराहरु पवन र रमनले हेर्न थालेपछि उनी गृहजिल्ला धनुषामा समाजसेवामा सक्रिय छन् । आफूले हालेको निर्माण व्यवसायको जग अहिले छोराहरुको कारणले कम्पनीले नयाँ उचाई लिएको छ ।
उनले आफूलाई विभिन्न पार्टीबाट सक्रिय राजनीतिमा लाग्नको लागि प्रस्ताव आईरहेको सुनाए । तर, अहिले आफूले कुन पार्टीमा जाने भन्नेबारे निधो नगरेको सुनाए । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले पनि आफूले समाजसेवा गरिरहेको सुनाए ।
राजनीति पनि समाजसेवाकै पाटो भएको भन्दै उनले त्यो काम अहिले भैरहेको सुनाए । कतिपयले भने जनकपुरको मेयर बन्न पनि सुझाव दिएका छन् । ०७४ सालको चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक कोटामा बसेका थिए । तर, उनी सांसद हुन सकेनन् ।
शिक्षामन्त्रीलाई भीम रावलको प्रश्न- पाठ्यक्रममा कहाँबाट ईसा आयो ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २६ जेठ। एमाले सांसद भीम रावलले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन कार्यमा सरकारको संलग्नताको आशंका गरेका
हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालको पथ सञ्चलनमा पुष्पवर्षा (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २६ जेठ । हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालद्वारा कञ्चनपुरको बेलौरी, रतनपुरस्थित पशुपति शिक्षा मन्दिरमा संघ